प्रचण्डले लगाएका झुठा र निकृष्ट लाञ्छना मैले सहन्छु भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ : अध्यक्ष ओली | Seto Khabar
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजमा आफु विरुद्ध झुठा र निकृष्ट लाञ्छना लगाएका बताएका छन् ।
सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सचिवालय सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले त्यस्ता लाञ्छना आफुले नसहने स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेज (राजनीतिक प्रतिवेदन) माथि जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘बैठक अगाडि बढ्न सक्ने देख्दिन । म त्यसमा बहस गर्न अहिले तयार छैन, किनभने मेरो तयारी नै पुगेको छैन, बुँदा पुगेका छैनन् भन्ने कुरा त भनिसकेको छु । त्यसमा फेरि थप के भन्नु छ र ? त्यसमा अरूको पानी चित्र त देखेको छु नि ! त्यसमा त यसो हेर्दा पानी चित्र त आउँछ नि ! मैले कुरा गरेको छु र सबै सुनेको छु नि ! अहिलेलाई यत्ति नै । धन्यवाद ।’
यस्तो छ सचिवालयमा ओलीको जवाफ :